रातोपाटी @ ब्याटल ग्राउन्ड : पार्टी छाडेर चुनाव लड्ने यी नेता कति सुरक्षित ? | Ratopati
Home रातोपाटी 2018-11-16T21:49:48.246697+05:45
रातोपाटी @ ब्याटल ग्राउन्ड : पार्टी छाडेर चुनाव लड्ने यी नेता कति सुरक्षित ?
बुटवल । पूर्वमन्त्री ओमप्रकाश यादव गुल्जारी रूपन्देहीको ४ बाट चुनाव लडेका छन् । पटक–पटक पार्टी परिर्वतन गर्दै चुनावको मुखमा आएर वाम गठवन्धबाट मैदान उत्रेका छन् । १३ कात्तिकमा राजपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष छाडेर पूर्वमन्त्री गुल्जारी नेकपा (एमाले)मा प्रवेश गरेका थिए ।
राजपाबाट टिकट नपाउने भएपछि उनी उम्मेदवारी दर्ताको तीन दिनअघि मात्रै एमाले प्रवेश गरेका थिए । अहिले उनी मर्चवार क्षेत्रमा चुनावी अभियानमा छन् ।
उनी जस्तै पार्टी प्रवेश गरेर चुनाव लड्नेहरूको सूचीमा छन्– कपिलवस्तु ३ मा अभिषेक प्रताप साह, सोही ठाउँमा ईश्वर दयाल मिश्र, नवलपरासी १ बाट हृदयेश त्रिपाठी ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य यी नेताले पुरानो घर छाडेर नयाँ घरबाट आफ्नो राजनीतिक यात्रा खोजेका हुन् । नयाँ घरबाट चुनावी जुवा खालमा हामफालेका नेता कति सुरक्षित छन् ? चुनाव हारे उनीहरूको भविष्य के होला ?
पार्टी प्रवेश गरी चुनावी मैदानमा उत्रेका नेताहरूले जित्लान् या हार्लान्, धेरैले चासो राखेका छन् । चिया पसलदेखि सनातिना पार्टी वैकठमा समेत चर्चा हुने गरेको छ ।
त्रिपाठी ठाकुरलाई छाडेर सूर्यको तापमा
नवलपरासी क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार हृदयेश त्रिपाठी राजपा छाडेर सूर्य चुवान चिन्हका साथ चुनावी मैदानमा छन् । राजपा छोडेर त्रिपाठी स्वतन्त्र समूहको नाममा एमालेसँग मिलेर चुनावमा उठेका हुन् ।
सत्ता राजनीतिको वरिपरि रमाउन चाहने नेता त्रिपाठी राजपाबाट चुनाव लड्दा हार्ने डरले सुरक्षित हुन वाम गठबन्धनबाट चुनावमा भिडेका हुन् । पूर्वमन्त्री समेत रहेका त्रिपाठी पार्टी प्रवेश नगरे पनि सूर्य चिन्ह प्रिय लागेको हो । त्रिपाठीले चुनावी भाषणमा वाम गठबन्धनले नै देशको नेतृत्व गर्ने भन्दै मत माग्ने गरेका छन् ।
मधेस विरोधी पार्टीको आरोप लगाउने त्रिपाठी एमालेकै चुनाव चिन्हमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार भएपछि राजपा समर्थित नेता कार्यकर्ताले त्रिपाठीको चर्को आलोचना गरेका छन् । यसअघि काङग्रेसका देवकरण प्रसाद कलवारसँग त्रिपाठीले चुनाव हारेका थिए । अहिले पनि पुनः उनै कलवारसँग त्रिपाठीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । स्थानीय तहको चुनावमा वाम गठबन्धनको पक्षमा २५ हजार १ सय ९७ मत खसेको थियो भने लोकतान्त्रिक गठबन्धनको पक्षमा २४ हजार ३ सय ४२ मत खसेको थियो । यस आधारमा यहाँ वाम गठबन्धन ८ सय ५५ मतले अगाडि रहेको छ ।
शुक्ला पुरानै, गुल्जारी र यादव नवप्रवेशी
राष्ट्रिय जनता पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष छाडेर रूपन्देही ४ मा एमालेबाट चुनाव लडेका पूर्वमन्त्री ओमप्रकाश यादव अहिले सूर्यचिन्ह अङ्कित झन्डा फहराउँदै मर्चवार घुमिरेहका छन् ।
चुनाव जित्नैकै लागि पार्टी छाड्ने गरेका गुल्जारीका लागि यसपटक भने चुनौतीको चाङमा छन् । विगतदेखि नै मधेस केन्द्रित दलले यो क्षेत्रमा जित्दै आएका छन् । यो क्षेत्रमा राजपाका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाको दबदबा रहेको क्षेत्र हो ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रूपन्देही ४ मा वाम गठबन्धनबाट गुल्जारी, नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमोद यादव र राजपाका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाबीच त्रिपक्षीय भिडन्त हुँदैछ ।
काङ्ग्रेसका यादव पनि हालसालै काङ्ग्रेस प्रवेश गरी टिकट पाउने नेता हुन् । यादवलाई प्रवेश गराउन प्रधानमन्त्री एवंम् पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासहित पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल महामन्त्री डा. सशाङ्क कोइरालालगायतका दर्जनभन्दा बढी नेता एकैपटक रूपन्देही आएका थिए ।
व्यवसायमा आबद्ध यादव राजनीतिमा नयाँ अनुभव भएका कारण त्यति सजिलो छैन । पूर्वमन्त्रीद्वय शुक्ला र गुल्जारीसामु यादवलाई चुनाव जित्नु फलामको चिउरा चपाउनु जतिकै हुनेछ ।
गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा यहाँ काङ्ग्रेसले १० हजार ५ सय ९, एमालेले २ हजार ३ सय ९, माओवादी केन्द्रले २ हजार २ सय ६४, सङ्घीय समाजवादी फोरमले १० हजार २ सय ६६, राप्रपाले १० हजार २ सय ६६ र फोरम लोकतान्त्रिकले ७ हजार ८ सय १ मत पाएका थिए । यो मतका आधारमा यहाँ लोकतान्त्रिक गठबन्धन अन्तर्गतको नेपाली काङ्ग्रेस, राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकको मत जोड्दा २० हजार २ सय ८ मत छ ।
यस्तै एमाले र माओवादीको वाम गठबन्धनको ४ हजार ५ सय ७३ मत छ । यस्तै सङ्घीय समाजवादी फोरमको १० हजार २ सय ६६ मत छ । स्थानीय तहको दोस्रो चरणमा रूपन्देहीमा चुनावमा भएकाले राजपा चुनावमा सहभागी नभएका कारण उसको मत देखिएको छैन । यस अर्थमा यहाँ वाम गठबन्धनभन्दा लोकतान्त्रिक गठबन्धन १५ हजार ६ सय ३५ मतले अगाडि रहेको छ । यो क्षेत्रमा राजपाको मत कति छ भन्ने आधार नभएको र समाजवादी फोरमको १० हजार हाराहारी मत रहेकाले यहाँ मुख्य रूपमा मधेसी मोर्चा र लोकतान्त्रिक गठबन्धनबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ ।
नवप्रवेशी अभिषेक र दयालबीच भिडन्त
फोरम उपमहासचिव छाडेर नेपाली काङ्ग्रेसम प्रवेश गरेका नेता कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार अभिषेक प्रताप शाह । पुख्र्यौली राजनीतिक वातावरणमा हुर्किएका शाह ६४ र ७० सालमा कपिलवस्तुबाट संविधानसभा सदस्य चुनाव जितेका थिए ।
२०६४ सालामा सबैभन्दा कम उमेरमा संविधानसभा सदस्य निर्वाचित भएपछि अभिषेकको चर्चित भएका थिए । उनी अजयप्रताप शाहका छोरा हुन् । अजयप्रतापले राप्रपाबाट २०५६ सालमा सोही क्षेत्रबाट चुनाव जितेका थिए । सम्पत्तिका हिसाबले सम्पन्न शाह शक्तिकेन्द्रमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न चाहन्छन् । फोरमबाट चुनावमा टिकट नपाउने भएपछि उनी काङ्ग्रेस प्रवेश गरेका हुन् ।
उनै नवप्रवेशी शाहसँग भिड्दैछन्– राजपा छाडेर सूर्यको ओत लगाउँदै ईश्वर दयाल मिश्र । राजपा छाडेर वामपन्थीहरूको साथ लिएका मिश्र २०४९ सालमा कुसुहवा गाविसवाट अध्यक्ष हँुदै उदाएका हुन् । भारतको लखउनबाट स्नातक गरका मिश्राले ६४ सालमा तमलोपाबाट संविधानसभाका सभासद बनेका थिए ।
बाबुराम भट्टराईको पालमा भौतिक निमार्ण तथा योजना राज्य मन्त्री बनेका मिश्र सत्ताराजनीतिकै वरिपरि बस्न चाहन्छन । मतदातसँग छुट्टै परिचय बनाएका मिश्रले वामपन्थीहरूको साथ पाएपछि बलियो प्रतिस्पर्धी बनेका छन् । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले १४ हजार ९ सय ९८, एमालेले १५ हजार ५ सय ७८, माओवादीले ६ हजार ८ सय ९८, राप्रपाले ४ हजार १ सय १८ र समाजवादी फोरमले ९ हजार १ सय ८० मत ल्याएको थियो । यहाँ लोकतान्त्रिक गठबन्धनको पक्षमा १९ हजार १ सय १६ मत रहेको छ भने वाम गठबन्धनको पक्षमा २२ हजार ४ सय ७६ मत रहेको छ ।
यहाँ ३ हजार ३ सय ६० मतले वाम गठबन्धन अगाडि रहे पनि यसअघि समाजवादी फोरममा रहेका र स्थानीय स्तरमा प्रभाव छोडेका युवा नेता अभिषेक प्रतापले राम्रो मत पाउने अनुमान गर्न सकिन्छ । यहाँ वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
कपिलवस्तु २ का अर्का नवप्रवेशी गुप्ता
राजपको स्थानीय तहमा निर्वाचन बहिस्कार निणर्यविरुद्ध उभिएका नेता हुन् बृजेशकुमार गुप्ता । हृदयेश त्रिपाठीसँगै स्वतन्त्रको नाममा वाम गठबन्धनको टेकोमा कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर २ बाट चुनावमा भिड्दैछन् ।
गुप्ता पुख्र्यौली राजनीतिबाट उदयाएका हु्न । ०३८ र ४३ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यमा निर्वाचित उनका बुबा भगवान दास गुप्ता देहन्तपछि राजनीतिकर्मी भए । इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेको गुप्ता २०५६ सालको संसदीय निर्वानमा विजयी भई आफ्नो राजनीति सुरु गरेका थिए । त्यसपछि मधेस आन्दोलनको अगुवाइ नै गरेका थिए ।
गुप्ता कपिलवस्तु ३ बाट ६४ र ७० मा निर्वाचित भएका थिए भने उनले कानुन मन्त्री जिम्मेवारी समालेको अनुभव छ । उनले काङ्ग्रेसका सुरेन्द्रराज आर्चाय र समाजवादी फोरमका रामनरेस यादवको सामना गर्नुपर्नेछ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सिंचाइ राज्यमन्त्री बनेका नेपाली काङ्ग्रेसका आचार्यले गुप्तालाई कडा टक्कर दिँदैछन् ।
गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले २५ हजार ३ सय २९, एमालेले १२ हजार ३ सय ८९, माओवादीले ३ हजार ४ सय ३५, राप्रपाले २ हजार २ सय ७१ र समाजवादी फोरमले २ हजार ६ सय २९ मत ल्याएको थियो । यहाँ वाम गठबन्धनको पक्षमा १५ हजार ८ सय २४ र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको पक्षमा २७ हजार ६ सय मत रहेको छ । अर्थात वाम गठबन्धन ११ हजार ७ सय ७६ मतले अगाडि रहेको छ ।
ठूला पार्टीले किन खोजे मधेसी नेता
स्थानीय तहको चुनावपछि एकाएक नेपालको राजनीति वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनले धु्रवीकृत भयो । पार्टी एकीकरणदेखि तालमेल गरेका एमाले, माओवादी र काङ्ग्रेस र फोरम लोकतान्त्रिक एकीकरणले स्थानीय स्तरमा आफ्नो पकड बनाएका नेताहरूलाई कुनै कित्ता समात्न बाध्य बनायो ।
मधेस केन्द्रित दलमा संविधान संशोधनको आन्दोलनले थकित पारेको थियो । चुनावमा भाग लिने कि नलिने भन्ने विषयले विवाद लिएपछि एकअर्काविरुद्ध आलोचनामा उत्रेका राजपाका नेताहरूबीच अन्तत चुनावमा जाने भए । त्यसरी चुनावमा जाँदा एकातिर वाम र अर्कोतिर लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सामना गर्नुपर्ने भएपछि सत्ता र शक्तिमा बस्न रुचाउने नेतालाई छटपटी भयो ।
पार्टी छाड्ने अधिकांश नेताहरू जसरी पनि आफैले टिकट पाउनुपर्ने र जित्न चाहने नेता भएकाले पार्टी नै छाड्ने गरेका हुन् । काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीले मधेसमा विगतदेखि नै चुनाव जित्दै आएका नेतालाई रोज्दा पार्टी बलियो हुने मानेर नवप्रवेशीलाई टिकट दिएको राजनीतिक विश्लेषक बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका पूर्व क्याम्पस प्रमुख डा. माधव पन्थी बताउँछन् । उनले ठूला पार्टीहरूले आफू कमजोर हुने ठाउँमा मात्रै नवप्रवेशीलाई टिकट दिएको बताए ।
ओमपकाश यादव गुल्जारी २०६४ सालको मधेस आन्दोलनपछि एकाएक राजनीतिको फ्रन्ट लाइनमा उदाएका हुन् । रूपन्देहीको खुर्दालोटन बाँध अवलोकन गरेको तत्तकालीन नेकपा माओवादीको वाईसीएल टोलीमाथि आक्रमण गरेपछि उनी उक्त क्षेत्रमा चर्चामा आएका थिए । एक दशकमै उनी राजनीतिबाट मन्त्री हुने नेता हुन् ।
रातोपाटी @ ब्याटल ग्राउन्ड
काङ्ग्रेसलाई वामपन्थीको गाली तर बज्दैन ताली
चुनाव सम्बन्धी यी समाचार पनि हेर्नुहोस्
राजेन्द्रले किन छाडे सर्लाही, किन गए धनुषा ?
काठमाडौंका १० क्षेत्र : बामगठबन्धनलाई हुन सक्छ ठूलो थ्रेट
आठ पूर्व गृहमन्त्री : आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कति सुरक्षित ?
मातृका पहिलो पटक चुनावी मैदानमा, कति सुरक्षित छन् धनुषामा ?
रूपन्देहीका प्रत्येक क्षेत्रमा मन्त्री नै मैदानमा, यस्तो हुनेछ भिडन्त
चुनावी मैदानमा २६ मन्त्री : को कति सुरक्षित ?
प्रदेश ७ का १५ निर्वाचन क्षेत्रमा यस्तो छ चुनावी अंकगणित
चुनावी मैदानमा ४ उपप्रधानमन्त्रीः गच्छदारको हिसाव नाफामा, कमल थापा डेन्जर जोनमा !
प्रचण्डलाई हराउने राजनको यस्तो छ चुनावी अंकणित
यी महिला जसलाई नयाँ शक्ति र एमाले दुवैले समानुपातिक सूचिमा राखे
निर्वाचन आयोगद्वारा समानुपातिक सूची सार्वजनिक, को-को अटाए ? (पूर्ण सूचीसहित)
बामगठबन्धनमा आफन्तै प्यारो, को–को आफन्तले पाए टिकट ?
महतोको धनुषा मोह : चार वर्षको योजना तर, टक्ला ‘देब्रे’ !
प्रतिनिधि सभाका १२८ सिटमा यी हुन् बाम, काँग्रेस र राजपा/फोरम गठबन्धनका उम्मेदवारहरु
प्रमुख दलका ‘हेभीवेट’ नेताले यसरी गरे उम्मेदवारी दर्ता
भारतीय दूतावासले धेरै कोशिष गर्दा पनि किन बनेन लोकतान्त्रिक गठबन्धन ?
यस्तो छ बामगठबन्धनको संयुक्त निर्वाचन घोषणापत्र (पूर्णपाठ)
झापा ३ को अंकगणित : सिटौला र लिङदेनको मतान्तर २३ हजार !
केपी ओलीको गृहजिल्ला झापाको यस्तो छ चुनावी अंकगणित
यी हुन् प्रत्यक्षमा लड्ने माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिसभाको ५९ जना र प्रदेशसभाकालागि ९७ अनुहार (हेर्नुहोस् नामावलीसहित)
दोस्रो चरणमा प्रदेश नं. १ का ४ जिल्लामा यस्तो छ दलहरूको अवस्था
प्रदेश नम्बर ४ का ६ जिल्लामा यस्तो हुँदैछ चुनावी टक्कर (स्थानीय तहमा प्राप्त मतसहित)
दुई वटा गठबन्धनबीच चुनाव भए यस्तो हुनेछ टक्कर
यी हुन् धेरै मतदाता भएका १० जिल्ला, जहाँबाट आउनेछन् प्रतिनिधिसभामा ५० सांसद
प्रदेश नं. ७ को चुनावी अंकगणित : काङ्ग्रेस अगाडि तर बामदलको गठजोडमा १ लाख ७० हजार मतले पछाडि
प्रदेश नम्बर ६ को शक्ति सन्तुलन : बाम दलको ६० प्रतिशत भोट, काङ्ग्रेसलाई ठूलै चुनौति
प्रदेश नं. ४ मा वाम दल काङ्ग्रेसभन्दा ७४ हजार १ सय ४८ मतले अगाडि : मिश्रित नतिजा आउने यस्तो छ सङ्केत
प्रदेश नम्वर ३ का ६ जिल्लामा यस्तो हुन सक्छ चुनावी भीडन्त (स्थानीय तहको मतसहित)
वागीले उम्मेदवारी फिर्ता नलिए यस्तो ‘एक्सन’को तयारीमा एमाले-माओवादी
प्रतिनिधि र प्रदेश सभामा ८ सय ७ को उम्मेदवारी, यी हुन् बाम गठबन्धन र काँग्रेस गठबन्धनका २२२ उम्मेदवार
प्रदेश नं. ५ का दुई जिल्लामा कस्तो होला चुनावी भिडन्त ? (स्थानीय तहको मतसहित)
प्रदेश नम्बर ६ का ७ जिल्लामा यस्तो हुँदैछ पूर्वमन्त्री र पूर्व सांसद्हरूको भिडन्त (स्थानीय तहको मतसहित)
प्रदेश नं. ७ का ४ जिल्लामा यस्तो हुनसक्छ दलहरूको चुनावी प्रतिष्पर्धा (स्थानीय तहको मतसहित)
पहिलो चरणको चुनाव : प्रतिनीधिसभाका यी १८ क्षेत्रमा छ १० हजार बढी मतको फरक
पाँच हजार बढी मतसहित बामगठबन्धन यी निर्वाचन क्षेत्रमा अगाडि
१११ प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि ७०२ को भिडन्त
पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने प्रतिनिधिसभाका ३७ क्षेत्रमा काँग्रेसमाथि ठूलो दवाव (यस्तो छ मतको अंकगणित)
गाँउ फर्केका महन्थलाई आफ्नैबाट जोखिम !